किन विजयपथमा चीन र विनासपथमा अमेरिका ? - Jhilko
सन् २००८ को वित्तीय संकटका बेला र अहिले कोभिड–१९को महामारी संकटका बेला दुबै समयमा चीनले अमेरिकालाई पछाडि पारेको अवस्थाले हुन सक्ने भूराजनीतिक परिवर्तन बेइजिङको पक्षमा जाने देखिन्छ । अमेरिकाले विनासकारी महामारीसँगको लडाइँमा जति लामो समय लगाउँछ त्यति ठूलो यो भूराजनीतिक परिवर्तन बेइजिङको पक्षमा जानेछ ।
यो महामारीको एक स्पस्ट वैश्विक बाटो छ । चीनमा यो महामारी देखिएर फैलिए पनि बेइजिङले यसलाई द्रुतगतिमा नियन्त्रमा ल्यायो । मार्चको अन्त्यसम्म आउँदाआउँदै चीनमा स्थानीय संक्रमण भई विरामी हुने संक्रमितको संख्या शून्यमा झ¥यो । यसको ठीक विपरीत अमेरिका र पश्चिमी युरोपमा यस्ता संक्रमितहरूको संख्या तीब्र रूपमा बढिरहेको छ ।
ठोस रूपमा अमेरिका र इटलीमा कोरोनाभाइरस संक्रमितिहरूको संख्या चीनको भन्दा माथि पुगेको छ । कोरोनाभाइरस संकटको गम्भीरता यो देशमा चीनको भन्दा बढी, चीनको जनसंख्या भन्दा कम रहेको अवस्थामा देखिएको छ । यथार्थमा अमेरिका र पश्चिम युरोपेली देशका कोरोनाभाइरस महामारीको चीनको भन्दा खराब अवस्थामा पुगेर झन खराब हुँदै गएको छ । अमेरिका र पश्चिम युरोपेली देशमा यो विनासकारी महामारी नियन्त्रणको असफलताले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकटको समयभन्दा धेरै गम्भीर हुने र यसका गहिरो भूराजनीतिक परिणामहरू हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।
चीनको सफलताका तत्काल दुई महत्वपूर्ण विषय छन् । चीनले यो कसरी प्राप्त ग¥यो ? अनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय के छ ? प्राविधिकरूपले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गरिरहने चिनियाँ बाटो अज्ञात छैनन् ।
क्वारेन्टाइन वा घरबाट बाहिर ननिस्कनु, घरमा बस्ने जनताका लागि आवश्यक हुने आपूर्तिका सामान दैला दैलामा पु¥याउनु, मास्क अनिवार्य गर्नु, परीक्षण गर्नु र प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पठाउनु जस्ता उपायहरू रहेका छन् । अमेरिका र पश्चिम युरोपका देशहरूले यस्ता उपायको अवलम्बन गर्ने भन्दा चीनले बढी कडाइका साथ पालना गरायो । यसको पछाडि प्रावधिक भिन्नता भनेको चीनद्वारा समाजमा पारिएको स्पस्ट बुझाइ रह्यो ।
सर्वाधिक आधारभूत विषय भनेको वास्तविक मानवअधिकारहरूको बुझाइले जनताको वास्तविक जीवनमा पार्ने असरहरूको बुझाइबाट गरेको चिनियाँ शुरूवात हो न कि पश्चिमाहरूले निर्माण गरेको कृत्रिम मानवअधिकार शुद्ध रूपमा भन्दा औपचारिक मानवअधिकारहरूको बुझाइबाट शुरू ग¥यो ।
अझ सामान्यरूपमा भन्नु पर्दा वास्तविक मानवहरूका लागि सर्वाधिक आधारभूत विषय भनेको तपाईँले फेसबुक प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ कि गर्नु हुन्न वा कुनै निर्वाचनका बेला तपार्इँसँग वाचा गर्ने कुनै राजनीतिज्ञलाई मतदान गर्न पाउनु हुन्छ कि र एक प्रणाली जुन पूर्णरूपमा फरक हुन्छ र तिनको वास्तविक नियन्त्रण हुँदैन तर वास्तविक क्षमता भनेको प्राणघाती खतराको चुनौती भएको बेला जीवित हुनु, राम्रो जीवन बाँच्न पाउने एक राम्रो अवस्था उपलब्ध हुुनु हो, स्वास्थ्य हेरचाहको अवस्था, शिक्षाको अवस्था र अन्य धेरै मानिसका वास्तविक चासोका विषयहरूको उपलब्धता हुनु हो ।
यस्तो परिदृश्यमा कोरोनाभाइरससँगको संघर्ष चीनमा एक स्तरको युद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो र चीनले भाइरसविरूद्धको जनयुद्ध द्रुत गतिमा चलायो ।
चीनका मापदण्डहरूले यो व्याख्या गर्छ । यसका रणनीतिहरू एक तार्किक बिन्दुबाट शुरू गरिएको बुझिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय वुहान र हुबेइमा भाइरसलाई घेरामा हाली उम्किन नदिन हरसम्भव प्रयास गर्नु थियो । यदि चीनमा यो फैलिएको भए यसलाई नियन्त्रण गर्न असम्भव हुने थियो । यसका लागि पहिलो आवतजावतमा निषेधाज्ञाको मादपण्ड अपनाइयो ।
वुहान हुबेइमा मानिसहरूलाई खुला छाडिएको भए अहिले अमेरिका र पश्चिम युरोपका देशमा भाइरस फैलिरहेजस्तै चीनभर फैलिएको हुने थियो । वुहान हुबेइमा यस्तो मापदण्ड अपनाउँदै समस्या भयो । त्यहाँ हजारौं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित गराउन समय लाग्यो ।
यो अवस्थालाई सोभियत संघको इतिहासमा महान लडाइँमध्येको एक स्टालिनग्राडसँग तुलना गर्न सकिन्छ । जर्मनको नाजी सेनालाई मासेर स्टालिनग्राडलाई जोगाउनुपर्ने थियो र त्यहाँका रक्षकहरूले सोभियत जनताको निर्णायक जीतलाई सुनिश्चित गर्न जीवनको बलिदान दिए । यहाँ मानव क्षति आफैमा भयानक थियो । समानान्तररूपमा वुहानका जनताले समग्र चीनलाई सुरक्षा गर्न आफ्नो बलिदान दिए । वुहानमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू चिनियाँ जनताका वास्तविक नायकहरू हुन् ।
तर, पश्चिमा मानवअधिकारवादीहरूले चीनको सफल रणनीतिलाई मानवअधिकार विरूद्धको अपराध भनी आलोचना गरे ।
तर, अहिले चीनले अंगीकार गरेका विधिलाई सबै देशले अपनाइरहेका छन् । ती मानवअधिकारवादीहरूका सल्लाह अपनाइएको भए अहिलेसम्म चीनमा लाखौं ज्यान गइसकेको हुने थियो ।
अमेरिका र पश्चिमा देशमा गलत बाटो अपनाउँदा त्यहाँ कोरोनाले महाविनास निम्त्याउन लागेको छ । गलत बाटो अपनाउँदा ती देशहरूमा चीनभन्दा बढी संक्रमित र मृत्यु हुन पुगेका छन् । चीनको जनसंख्या ती देशहरूको तुलनामा धेरै ठूलो छ । अमेरिकाको जनसंख्या भन्दा चार गुना र इटलीको तुलनामा २३ गुना ठूलो चीनको जनसंख्या छ । अमेरिकी सेनाको विदेशमा विभिन्न समयमा लडेका युद्धमा गम्भीर क्षति भएको छ ।
विश्वयुद्ध दोस्रो, कोरिया युद्ध, भियतनाम युद्ध, इराक युद्ध यसका उदाहरण छन् । अमेरिकी भूमिमै पनि गृहयुद्ध र सन् १९१८–१९मा स्पेनिश फ्लुबाट पनि मानव क्षति अमेरिकामा नभएको होइन ।
कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको मृत्यु तेस्रो ठूलो मृत्यु हुन सक्ने र यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकट भन्दा खराब अवस्थामा क्षति पु¥याउन सक्ने देखिएको छ ।
आर्थिक क्षतिका अतिरिक्त यसले भूराजनीतिक परिणामहरू तत्काल र दीर्घकाल दुबै अवस्थामा पार्छ । अल्पकालीन असरको रूपमा कोरोनाभाइरसले अहिलेसम्म चीन, अमेरिका र पश्चिम युरोपका देशमा ठूलो धक्का दिएको छ । यी क्षेत्रका अन्य देशहरूमा आउँदा दिनमा यस्तो धक्का लाग्नेछ । ती देशहरूले कि त चीनको सफलपथमा हिँड्न खोज्छन वा अमेरिकाको विनासकारी बाटो अपनाउने छन् ।
यसका अतिरिक्त चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक देश भएकोले उनीहरूलाई व्यवहारिक रूपमा चिनियाँ सहयोग निर्णायक हुन सक्छ । फ्रान्सले चीनबाट एक अर्ब मास्क ल्याउन आदेश दिन सक्छ । पश्चिमा अवधारणाका अर्थहीन औपचारिक मानवअधिकारले अर्बौ मानिसको प्रदर्शन निम्त्याउने छ । यसले चीनको पक्षमा भूराजनीतिक परिवर्तन गराउने अनिवार्य जस्तो देखिन्छ ।
दीर्घकालीन भूराजनीतिक परिणाम अमेरिकाले विद्यमान विनासकारी संकटको कहिलेसम्म सामना गर्ने हो त्यसमा भर पर्नेछ । गम्भीर आर्थिक मन्दीबाट अमेरिका जोगिन अहिले असम्भव जस्तो देखिन्छ ।
लण्डनका मेयरका आर्थिक तथा व्यावसायिक नीतिका पूर्वनिर्देशक तथा रेमिन युनिभर्सिटी अफ चाइनामा चोङयाङस्थित वित्तीय अध्ययन प्रतिष्ठानका बरिष्ठ विज्ञ जोन रोसले भने अनुसार अमेरिकाले आफ्नो चिकित्सा संकट समाधान गर्न लगाउने समयमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको सुधार त्यसै आधारमा हुनेछ । यो भनेको अमेरिकाले समग्ररूपमा गलत अवधारणामा स्थापित गरिएका मानवअधिकारको परित्यागको विषयमा भर पर्नु हुन्छ । अर्थतन्त्रका लागि मानवजीवन सहयोगी हुने गरी चीनले अपनाएको सही बाटोको अंगीकार हुन्छ ।
गएको १२ वर्षमा विश्वले दुईटा ठूला परीक्षण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकट र कोरोनाभाइरस महामारीको संकट दुबै बेला चीनले अमेरिकालाई पछि पारेको देखियो । यसले चीनको पक्षमा महत्वपूर्ण भूराजनीतिक परिवर्तन ल्याउने छ । अमेरिकालाई कोरोनाभाइरस महामारीमाथि नियन्त्रण गर्न जति लामो समय लाग्ने छ त्यति ठूलो यो परिवर्तन हुनेछ । एजेन्सीको सहयोग
इनरुवामा एम्बुलेन्स दुर्घटना, एकको मृत्यु
निर्वाचन आयोगका अनुसार, चौथो चरणको निर्वाचनमा १२ करोड ७९ लाख मतदाता रहेका र उनीहरुले...